कुकुर रोएको सुन्नुभयो ? अशुभ संकेत दिएको हुनसक्छ ? - ज्ञानविज्ञान
यिनिहरु रोएमा तथा कराएमा आउदो दिनमा अशुभ घट्ना घट्ने भन्नेमा हामी विश्वास गर्ने गर्दछौँ ।
इलाकामा हक जमाउन जुनसुकै कुकुरको पनि आफ्नो निश्चित क्षेत्र तथा इलाका हुने गर्दछ । यि कुकुरहरु आफ्नो इलाकाको रक्षा गरिरहेका हुन्छन् ।तसर्थ कुकुरहरु पनि एउटा इलाकाको कुकुरलाई अर्को इलाकामा आउन नदिन तथा उसलाई चेतावनी दिन कुकुर ठुलो स्वरले रोएर तथा भुकेर आफ्नो साथीहरुलाई सन्देश प्रदान गर्ने गर्दछ ।
Don't Miss it शिव पुराणका आनुसार यस्ता कार्य गर्ने मानिसलाइ कहिल्यै माफी हुदैन
Up Next धन प्राप्तिका लागि चाँदीको हात्ती